Dhiganaha Sheekh Jabriil | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxaa maanta gacantayda soo galay, sida sawirka hoose aad ku aragtaan, dhiganihii muranku ka taagnaa ayaamahaan oo magaciisu ahaa Islamic Extremism : The Untold Truth, oo uu qoray Shiikh Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil. Inkasta oo uu qoraagu sidii ilmo sooseexis ah buugga dayriyey intii uu dhexda iigu soo jirey, haddana xiisihii aan u qabey akhriskiisu wax door ah isma dhimin.
Anigu Shiikh Cabdiraxmaan ayaamahaan muranku taagnaa ka hor ma aqoon, qoraal uu leeyahay iyo muuqaal uu duubay midna ma akhriyin mana daawan. Xataa qof jira in uu yahay ma hubo in aan ogaa, dhiganaha uu qorayna hore uma maqlin. Yeelkeede, marka dhigane la qorayo sida caadiga ah baaraandeg ayaa ka horreeya, inta la qorayo la socda, marka la dhammeeyana ka dambeeya. Ma aha sida maqaal yar oo uu qofku hal fadhi ku qoray ama hadal uu maalin meel ka yiri oo iyaga qofka si fudud gef waa uga dhici karaa. Dhiganayaasha laftigooda gefaf sababo badan yeelan kara waa lagu geli karaa, laakiin, in khaladku ahaan waayo qodobbo tirsan oo la xusi karo, balse noqdo mid dhiganahii oo dhan loo dayriyo ayaa ah arrin la yaab leh.
Dhiganaha waxaa la qoray 2015kii, waana wakhti uu qoraagu falcelin ka heli karey akhristayaasha oo haddii ay gefaf ku arkeen ay la wadaagi kareen. Mana jirin wax muujinaya in uu iska fogeeyey dhiganaha ka hor inta aan Shiikh Shible maxkamaddiisa soo taagin. Hadda mushkiladdu waxay tahay: ma cadaadis baa noqoshada ka keenay mise garwaaqsi? Tiisaba haddii loo raaco oo la yeelo in uu gefkiisa garawsaday, waxaa muuqata in uu arrinkaasi goor xil leh ku soo beegmay.
Sida buugga cinwaankiisa ka muuqata wuxuu qoraagu sheegayaa in uu dhiganuhu haawin doono run la huurin jirey oo aan in ay qorraxda aragto loo oggolayn. Marka hadalkaa laga cabbir qaato waxaa iska cad in uu noqon doono dhiganuhu mid wax gilgila. Waxaa iyana la ogyahay in loogu talagalay in dadku arkaan, akhristaan dabadeedna isbeddel xagga fekerka ahi uu ku dhasho. Mise ma ahee shiikhu wuxuu ugu talagalay in buugga baalashiisu qol mugdi ah iyagu isku akhristaan? Maxaa keenay in markii dadka lagu baraarujiyey in dhiganahaasi jiro uu iska fogeeyo? Sow sida uu isaguba sheegay qoraalka uguma talaggelin in uu bulsho dibudhacsan hore ugu soo mariyo?
Mar haddii dhiganuhu jirey ilaa iyo 2015kii, uusanna cusbayn oo hore loo maqlay, sababta hadda shiikha loo maxkamadeeyey waxaan filayaa in ay tahay in uu qoraal ama muuqaal soo geliyey bogga Maandoon.com, halkaasina ay tahay meeshii shiikha laga raacay ee aan isaga si gaar ah loogu socon.
Si kastaba ha ahaatee, waa la gefaa waana laga noqdaa oo intaas waxba kuma jabna, ee waxaa kala sharaf badan marka adoo xor ah aad iskaa iyo waqti aad adigu dooratay u garawasato gefkaagii iyo marka adigoo qadaadka lagu hayo hadallo dadduuc u ekaan kara lagaa yeersiiyo. Si kale haddaan u qoro, gooraha gefka la qiranayo lagana noqonayo ayaa kala habboon oo qofka maqaamkiisa iyo sharaftiisa u kala roon.
Nin la oran jirey Dhuxul Quraanyo oo Woqooyiga Mudug aad looga yiqiin, hadallona laga reebay ayaa isaga oo jiilaal daran hayaan kulul ku jira hooyadiis oo malaha xanuunsanayd naftii deysey. Mid walaalkiis ah oo ratiga habartu saarrnayd wadey ayaa Dhuxul u yimi oo ku yiri “ walaal hooyadeen waa ka anguugtey.” Dhuxul oo dareemay habartu sida ay yeeshay iyo xilligu in aysan is lahayn ayaa yiri “ Allow taaseey! Ma goor la dhintaa?!”